GFS Tank, Double Membrane Gesi Kuchengetedza, Inoyerera Gasi Kuchengetedza Tangi - Boselan
GFS matangi mukana weiyo yakanaka ngura kuramba, yakaderera mantainance mhosva, pfupi yekuvaka zuva, yakaderera chinodiwa chesaiti, inochinjika uye yakasimba kuita inoita kuti iwanzoshandiswa zvakanyanya mumaspala uye maindasitiri kurapwa kwemvura, senge IC matangi, aeration matangi, sedimentation matangi uye radial sedimentation Matangi.
Matangi eBSL anoshandiswa zvakanyanya muprojekti yebiogas pasi rose Inoshandiswa sedziva remutemo, anearobic digester, yechipiri anaerobic digester, sedimentation tank, chengetedzo tangi yebiogas slurry. GFS tank ine mukana weakanaka ngura kuramba zuva, yakaderera chinodiwa saiti, inochinja uye yakasimba kuita, inoita kuti ipfuure imwe mhando yematangi.
KUNWA & MOTO MVURA
Matangi eBSL GFS anogona kushandiswa sematangi emvura akakwira, ayo anopa mvura kunzvimbo dzekugara. Inokwenenzverwa uye inoshanduka pakuita kwekuvaka, hupenyu hwakareba hwekutenderera (anopfuura makore makumi matatu), kurwisa kwakakura ngura uye mutengo wakaderera wekugadzirisa unoita sarudzo yekutanga yekudyara chirongwa. Nemaitiro akanaka ekuumba, kukwirira kwakanyanya kwemativi uye zvikamu, kana basa rakasimba, senge midziyo yekicheni, chikafu uye zvigadzirwa zvemakemikari kugadzirisa uye yekuchengetedza michina
Yedu kambani yakashandisa seti yehunyanzvi hwehunyanzvi, zvishandiso uye CNC murazvo wekucheka muchina wakatumirwa kubva kuEuropean yekuchengetedza indasitiri, simbi chimiro otomatiki sandblasting michina, otomatiki pendi kamuri, hombe sheari kukotamisa michina, CNC chibhakera, kushandisa kugadzirwa kwesimbi simbi ndiro. Iyo inoshandiswa kuchengetera soya, mafuta anodyiwa, betel nut, zviyo uye zvimwe zvigadzirwa zvekurima. Mushure memakore ekuvandudza, yakave inozivikanwa mutengesi yeGFS tangi yemidziyo yesilos kuChina nekune dzimwe nyika.
Tora iwe kuti uzive zvakawanda
Zvita / 24
Iyo Yakareba Iwe guta dhizaini muZhejiang ...
Kubvumbi / 21
Kuvakwa kweMvura Kuchengeta Tangi mu ...